2 iminyaka inyanga 1 edlule #303 by Colonelwing
Kulabo abafuna lokho kubonakale nice real futhi kwenziwe kahle A350 in the mode payware.
I dont awazi lutho ukuthi umkhiqizo ,, kodwa kulokho Ngiye akazange ukufunda kuleyo ukubuyekeza ,, kubukeka elikhulu.
Okukhethayo ,, njengoba nami ngiye ngaphawula ongesona isihlobo obuseduze ne ukuthi umkhiqizo ziyakhuluma ngenhla.
Mhlawumbe othile ongafeza e siyoxoxa okwengeziwe ,, ukhululeke ukwenza kanjalo Gentelmen ...
2 iminyaka inyanga 1 edlule #304 by Dariussssss
Planes efana nale uzokwenza uhambe for ezinye sims, efana P3D kanye X-Plane ....
2 iminyaka inyanga 1 edlule #315 by JanneAir15
It akabheki nice Ngicabanga nokuthi ngikwazi ukuthi ngoba ngase ngifuna futhi for a A350 omuhle futhi ngicabanga lokhu nguye kodwa mina futhi ngifuna ube A380 omuhle. Ukhona sicela basikisela me uma ungenawo ukwazi okuhle Airbus A380 ne ikhono wengeze liveries kakhulu. Ngiye wadala ngesihloko ebizwa ngokuthi "Airplane izincomo" ngakho uma une ukusikisela A380 ngicela ungitshele.
2 iminyaka inyanga 1 edlule - 2 iminyaka inyanga 1 edlule #321 by Colonelwing
choice Nice ukuthi Airbus A350-900 XWB Janne ,, khumbula kungokwenduduzo XPlane hhayi okwamanje for FSX
Vele qiniseka befort ukuthenga une XPlane Sim ...
None kancane i think kungcono ephawulekayo ukuthi ngisho ngaphandle olulodwa ukusebenza officical dokhumenti ezikhishwe okwamanje Flight Factor ngaphumelela it futhi wasungula A350 ngokuphelele kukholakale X-indiza. Ngibheke phambili updates elandelayo yale aicraft. I wonder unyaka abasebenzisi FSX / P3D uzokwazi ukundiza i-Airbus A350.
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 inyanga engu-1 edlule Colonelwing.
2 iminyaka inyanga 1 edlule #323 by JanneAir15
Sawubona! Siyabonga ulwazi ngoba nginakho FSX kodwa kukhona A350 by Aerosoft engenxa FSX.
By the way my name is Janne (hhayi Jeanne) futhi Angiyona abesifazane!
2 iminyaka inyanga 1 edlule #324 by Colonelwing
Ngakho sorry ,, imininingwane eye yalungiswa ...
Isikhathi ukudala page: 0.625 imizuzwana